Blackphone 2 dib u eegis: privacy doesn't have to come at the cost of usability - Rule News
Blackphone 2 dib u eegis: gaarka ah uusan haysan inay ku timaado kharashka geynta
Ma ahan ugu horumarsan, kaamirooyinka ay tahay mid daciif ah oo ay design waa halkii Caraabaah, laakiin waxa la yaab leh sida alaabada ay software iyo adeegyada waa. Blackphone The 2 xajiya ayuunbaa gelinno of Android oo aan ka heli in aad hab sida badan oo adeegyada gaarka ah-wajahan samayn.
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Blackphone 2 dib u eegis: gaarka ah uusan haysan inay ku timaado kharashka geynta” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo theguardian.com 11-Wednesday November 2015 07.30 UTC
In dunida ka mid ah barnaamijyadooda damiir iyo shirkadda raadraaca casriga, Blackphone ah 2 ballan si looga caawiyo sii macluumaadkaaga shakhsiyeed ee gaarka ah iyada oo aan qaadan in aad hab.
Daabacaaddii labaad ee Blackphone by shirkadda ammaanka iyo asturnaanta Silent Circle waa talaabo in geynta iyo waa lama filaan ah ay fududahay in la dhigay ilaa iyo isticmaalka, xataa arday gaarka ah.
Waxba waa unhackable, Dabcan, oo jirrabaya sida adkeysi waxay ahayd in weerar aan suurto gal ahayd marxaladan.
The lacag ah 'S' wuxuu ku saabsan yahay calaamadeysanayaan kaliya in Blackphone waa wax gaar ah. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
style mabda'a Blackphone 2 ee ku habboon in ay ujeedada. From ka baxsan waxa ay u muuqataa sida fiican u dhigay-wada bulukeeti ah generic madow. Front iyo dib waa muraayad, dhinac ka soo koobay caag ah.
maldahan kaliya ma aha oo kaliya qalab generic qaar ka mid yahay oo kali ah la arki karo logo Silent Circle yar dhabarka ereyada "blackphone" iyo "gaarka ah by design" ee Ereyada cawl-on-madow.
Waa arrin si raaxo leh in ay qabtaan, oo ma aha sida meelo sibiibix ah sida casriga kale galaas, laakiin diiro faraha sida magnet ah. Shaashadda LCD 1080p 5.5in macquul ah oo dhalaalaya iyo cad. Waa tayo la mid ah in loo isticmaalo in OnePlus ah 2, tusaale ahaan, laakiin ma aha arrin ku saabsan par leh in mudanna ah Nexus 6p ama Galaxy qod6 Edge +.
phone waa 7.9mm qaro, taas oo ku saabsan celceliska casriga ah ee maanta iyo dareemo sidoo dhisay. Waxaa flexes yar cadaadis gacmahaaga ka, taas oo macnaheedu yahay waa laga yaabaa in ugu wanaagsan in aan ku rid jeebka dhabarka iyo fadhiistaan.
Screen: 5.5in LCD 1080p (518ppi)
Kaydinta: 32GB; booska kaarka microSD
Nidaamka Operating: Silent OS 2 ku salaysan Android 5.1.1
Camera: 13Xildhibaan camera gadaal, 5Xildhibaan camera hore jeeda
Xiriiriyaan: LTE, Wi-Fi, Bluetooth iyo GPS
Cabirka: 152.4 x 76.4 x 7.9mm
A booska microUSB caadiga ah ee hoose ee. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Blackphone The 2 ayaa Qualcomm ee Snapdragon bartamihii kala duwan- 615 processor, taas oo dhab ahaan awood ku filan dhagaystayaasha loogu talagalay telefoonka ee. Waxaa dareemay faham ka, Hadhi xor ah oo calalin dhex multitasking aan arin.
Kaliya kuwa isku dayaya in ay ka ciyaari garaaf kulan degdeg ah ku dhibtoon laga yaabaa in, laakiin haddii ay taasi tahay waxa aad tahay ka dib markii Ma hubo sababta aad ka fiirsaneysa Blackphone a.
Waxaan ogaaday in soo dhawaynta Wi-Fi ma ahaa sida wanaagsan sida waxa ay kari waayeen, marka la barbar dhigo qalabka mid ah, laakiin soo dhaweynta 4G ahaa aad u fiican, sida tayada call ahaa.
smartphone ayaa socday yar 24 saacadood la'aan, iyadoo la isticmaalayo macquul culus oo badan oo emails riix iyo farriimaha. Waxaad u baahan doontaa in ay ka qaadaan maalintii hal mar, laakiin waa in aan soo arko aad ilaa aad ka hesho guriga xataa haddii aad ka baxo Habeenka.
Guud ahaan, aadan dareensaneyn sida aad wax halis magaca iibsato a "aamin" phone.
Google oo Phone Silent on qalab ka mid ah, iyadoo fursad u heysata inay sii macluumaadkaaga sida gaarka loo leeyahay sida aad rabto in aad. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Aamus Circle dhisay Silent OS on top of Android Google 5.1.1 Hurdiga ah, taasoo kaliya lagu bedelay version 6 Marshmallow.
Beyond animation boot ah oo xiiso leh, waxa ay u muuqataa oo u dhaqmo sida Android stock. Waxaad u helaan oo dhan apps Google iyo in Store Play in ay soo bixi lahaayeen barnaamijyadooda dhinac saddexaad oo aan xayiraado dhabta ah.
The daro keli ah ayaa runtii la arki karo in ay indhaha ku layli ah waa a icon Center Security, Silent Store iyo apps Phone Silent, taas oo waa wax fiican, sida qof kasta oo yaqaana Android xaq guriga noqon doontaa.
The waji stock Android-apparence lakabyada qarsoon ee amniga iyo arimaha gaarka dhisay galay telefoonka.
The app Center Security socdaa user dhex, laakiin muhiimad aad leedahay control granular badan ma aha oo kaliya xogta shakhsiga ah in Apps heli kartaa, laakiin sidoo kale ka hardware iyo adeegyada ay telefoonka.
Ha rabto app in xogta meesha ama internet ku helaan? dhibaatada No. Waxay ka shaqaysaa hab la mid ah nidaamka ogolaanshaha cusub fulin by Google ee Marshmallow oo wuxuu ka dhigay caanka ah by cyanogen OS.
The app Center Security aad Socon fursadaha gaarka ah iyo ammaanka. xataa Waxaad qeexi kartaa meel Google-free. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
The gacanta per-app waa mid heer kaliya. Blackphone The 2 waxa uu leeyahay oo ku baaqay "meelaha". meel kasta waa sida profile gaar ah user gudahood oo xayiraad la samayn karaa heer nidaam. meel kasta oo aan la hadli kartaa kale, hubinta waxa aad bay ku rideen joogo waa in. Waxaad heli kartaa, tusaale ahaan, meel aad email shaqada, xiriirada, jadwalka iyo waraaqaha la deyrka off ka qaybaha kale ee telefoonka.
Haddii aad rabto in aad isticmaasho app ah, laakiin waxaad u malaynaysaa waxaa laga yaabaa in halis, aad u gelin kara in meel qufulan hoos si haddii aanu isku dayi iyo sameyn waxyaalo cabsi badan waxa uu go'doonsan ka kale ee aad xogta.
Helitaanka in meel kasta waa mid fudud. Waxaad sidoo kale si toos ah uga soo lockscreen la codes kala duwan bedelan kartaa meelaha ama isticmaal switcher ee hadh wargelinta. Heerka ammaanka ku siin meel walba waa la bedeli karaa, ay ka mid yihiin awood u leh inay cakiran meel kale markii mid ka mid ah si gaar ah waa firfircoon.
Shirkadaha qeexi karaa meel oo ay maamulaan xeerar ku saabsan, taas oo macnaheedu yahay in aad dhex gali karaan qof ahaaneed iyo shaqeeyaan on phone isla aan wax u dhimin amniga xogta. qalab kale oo dhowr ah, oo ay ku jiraan BlackBerrys samayn karo wax la mid ah.
Sida sahlan ama adag in la isticmaalo sidii aad u dooratay
Randomise suufka pin ku lockscreen ee ammaanka dheeraad ah. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Kasta dejinta iyo qaabeynta codadka adag, laakiin Center Ammaanka hanuunin kara dadka isticmaala dhex. Iyadoo samir ku filan aad ka soo shaqeyn karaan wax walba oo 30 daqiiqo.
Waxaa loola jeedaa in aad ka dhigi kartaa telefoonka sida fudud ama adag si ay u isticmaalaan sida aad shuruudaha ammaanka waaran. Waxaad randomise kartaa suufka pin ku lockscreen ah, taas oo ka dhigaysa waxaa dhib badan in uu qof kale imaylka badan garabkaaga ee aad habayn, laakiin sidoo kale ka dhigayaa adag tahay in la furo telefoonka.
Waxyaabaha kale xusid mudan yihiin xidhiidh toos ah ama off ee Wi-Fi ku salaysan goobta, yabooha updates degdeg ah in nidaamka qalliinka si toos ah uga Circle Silent si loo hubiyo in cayayaanka ammaanka waxaa la karkaray sida ugu dhaqsaha badan, iyo sirta qalab in uu yahay on by default.
Phone Silent iyo Store
Store The Silent ku jira apps baaray by Silent Circle, laakiinse iyagu waa yar yihiin oo kala fog. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
In lagu daro si beddelka ka danbeeya Muuqaallo ku sameeyey Android, Circle Silent bixiyaa cod lo wacaya iyo fariimaha iyada oo ay app Phone Silent.
Waa sir telefoon iyo farriimaha kaliya ee u dhaxeeya Silent users Phone, laakiin Phone Silent waxaa laga heli karaa labada macruufka iyo Android, taas oo macnaheedu ma ahan oo kaliya dadka isticmaala Blackphone waxaad wici kartaa.
Waxay u baahan tahay Times a on-sare ee heshiis telefoonka mobile, laakiin caadi ahaan lagu guraa doonaa gadashada ah Blackphone ah. Marka la eego tirada dadka isticmaala Silent Phone waa yar yahay, waa of utility ku koobnayn nolosha guud, laakiin haddii ganacsiga ama koox ahayd si ay u iibsadaan jumlada galay Blackphone ay chat yaabaa cabsi la'aan ah lagu snooped on.
Waxaad wici kartaa non-Silent users Phone, taas oo heshay telefoon ilaa uu u baahan yahay in ay ku xidhmaan shabakad telefoonka dhaqanka, oo ma aha sida aamin ah laakiin u ogolaanaya dadka isticmaala si looga fogaado in la snooped ka barta of call, haddii tusaale ahaan aad ugu yeeray guud ahaan ah la xiriira internet cabsan.
Silent Store ayaa sidoo kale waxay bixisaa apps la baaray by Silent Circle in la snooping free. Xulashada yar oo ka mid ah barnaamijyadooda Firefox, Keeper, dhuujin: Badalka la Tor iyo Ghostery Privacy Browser, oo dhan degsan la Silent Circle ee shaabadda ogolaanshaha.
camera ma aha wax ay guriga ku qori ah oo ku saabsan, laakiin u samayn doonaa xigtay ee sawirada dokumentiyada ama bisad. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
The camera 13-megapixel wax ku qaylin oo ku saabsan. Waxaa soo saartaa photos celcelis ahaan in nalalka wanaagsan, laakiin maydhay soo baxay, images maqlaan markii toogtay gudaha hoos iftiinka aan dabiici ahayn.
The camera hore u jeedinta shan-megapixel waa diiradda go'an oo si siman u dhiig yar.
Blackphone The 2 ayaa diyaar u ah £ 659 oo aan heshiis telefoonka mobile UK, laakiin ay ka mid yihiin 100 daqiiqo oo Times Phone Silent muddo sannad ah.
Wixii la barbardhigo, BlackBerry ee phone PRIV Android waa £ 559 oo waxay bixisaa kalasaar nolosha shaqada-gaar ah la mid ah.
Blackphone The 2 ballan qaaday in ay noqon smartphone ugu ammaan Android heli karaa.
Waxaad samayn kartaa noloshaada sida fudud ama adag tahay sida aad rabto in aad, oo leh heerar kala duwan ee ammaanka. Iyadoo Blackphone ah 2 ma aha jawaabta salaadda qof, Waayo, khayaano ama muhiim na dhexjoogaa, waxaa laga yaabaa in qalab yaraan daran shaqada.
Iidooyinka: amniga oo aan ka mashaqeeyo ah dhib, meelaha, waayo-aragnimo Android caadiga ah, taleefan Windows XP, waxqabadka uu faham, promise of rapid security updates
Arrrimaha: bland design, weak cameras, qaali, weaker than expected Wi-Fi connectivity
Android, Qodobka, Qalab, Telefoonada Mobile, Privacy, Dib u eegida, Samuel Gibbs, Telefonada casriga ah, Technology, Telecoms, news World
← Smartphone ugu wanaagsan (2015) [VIDEO] dib u eegis kiniin Amazon Fire →